Tahaka Ny Ahoana No Fanoratana Ny Anaranao Araka Ny Abidia Latina Vaovao Ao Kazakhstan? · Global Voices teny Malagasy
Tahaka Ny Ahoana No Fanoratana Ny Anaranao Araka Ny Abidia Latina Vaovao Ao Kazakhstan?
Voadika ny 08 Novambra 2017 4:58 GMT
Vakio amin'ny teny Ελληνικά, Türkçe, Español, русский, 繁體中文, Swahili, English
Tabilao mampiseho ny abidia Kazakh vaovao, izay nivoaka tao amin'ny tranonkalan'ny filoham-pirenena.
Mampiseho ho an'ireo mpisera ny fanoratana ny anarany ao amin'ny abidia Latina vaovao izay hanomboka hanan-kery amin'ny taona 2022 ny tranonkala iray ao Kazakhstan. Maro no naneho hevitra tamin'ny hakiviana rehefa avy nahita ny anarany nampiana faingomihantona.
Ny anarako ao amin'ny abidia Kazakh vaovao “nohatsaraina”: Qrystc'a'n Blo'yr. : ((((( Jereo ato ny anaranao .
Manana faingomihantona ny sivy amin'ireo litera miisa 32 ao amin'ny abidia vaovao, ka namela ny sasany izay nanohana voalohany ny fanovana ny Sirilika ho Latinina amin'ny tenim-pianakaviana Kazakh Tiorkika izay manenina amin'ny fanovana.
Tsy nanontaniana avokoa akory ny hevitr'ireo olom-pirenena ao amin'ny firenena mpanao didikofelehibe. Torotoron-kevitra avy amin'ilay milaza tena ho mpanavao maoderina, ny Filoha Nursultan Nazarbayev, 77 taona ny fanovana.
Taorian'ny nanambaràn'i Nazarbayev ny fanombohan'ny fiomanana amin'ny fanovana izay hahitana an'i Kazakhstan ho lasa soratana hoe Qazaqstan amin'ny teny Kazakh, nanjary marika tsy nampoizina mampiseho ny fanoherana tao amin'ny tambajotra sosialy ilay karaoty Kazakh manetry tena.
Tahaka ny nazavain'ny lahatsoratra iray tao amin'ny Economist :
Nanamarika ireo mpitsikera faly fa mety ho saebiz ny dikantenin'ny karaoty amin'ny teny Kazakh ato amin'ity abidia ity , izay toy ny fandikana ny teny Rosiana amin'ny “mbay tany ry ***”.
Nanamarika ny fampitam-baovaon'ny governemanta Rosiana Sputnik fa misy ihany koa ireo teny hafa izay mety ho teny ratsy ho an'ny olona mahay ireo abidia roa ireo.
Mety ho tsy azo ihodivirana ireo karazan-teny hafahafa ireo, ary ny Sirilika ihany no mbola ho abidia hosafidian'ireo miteny Rosiana an-tapitrisa manerana ny firenena. Saingy mbola mibaribary ny fielezan'ny faingomihantona amin'ny teny Kazakh .
Noho izany dia nilaza i Nazarbayev fa tonga ny fotoana hanekena ny dikanteny farany ho an'ny abidia KZ Latina. Izay mahatsiravina amin'ny fahabetsahan'ny faingomihantona..
Nirotsaka nijery ny abidia Latina-Sirilika-Kazakh Latina ny Global Voices mba hamantarana izay tena manahirana ny Kazakhs sy mba hahitana ny fomba fahitantsika izany amin'ny lafiny hafa.
Tsotra ny fomba fiasa. Alao sary an-tsaina aloha ny mety hiseho amin'ny anaranao raha toa ka teraka tany Kazakhstan ianao, izay anisan'ny Firaisana Sovietika talohan'ny taona 1991.
Mba hanaovana izany, ampiasao ny fanovana teny Latina ho Sirilika, toy ilay hita ao amin'ny Lexilogos “kitendry amin'ny fiteny maro” . Avy eo, avadiho teny Sirilika ho lasa teny Kazakh Latina , mba hahafantarana ny isan'ny faingomihantona izay hananan'ny anaranao.
Ho lasa Хуан Тадео ny anaran'i Juan Tadeo, tompon'andraikitra ato amintsika any Meksika amin'ny fanoratra Sirilika. Saingy amin'ny teny Latina Kazakh dia ho lasa i Hy'an Tadeo ny anarany, nisy faingomihantona tokana miaraka amin'ny feony somary teny Shinoa .
Nanomboka nibaribary ny faingomihantona rehefa tonga ny anjaran'ny Talem-pitantanan'ny Global Voices Georgia Popplewell, na Djordji'i'a Poppely'ell. Ary nandeha namakivaky ny tafon'i namanay Ogandey Prudence Nyamishana (Pry'dence Ni'ami's'ana) izy avy eo.
Mahagaga ihany anefa, fa tsy nahasahy nikitika ny talen'ny Global Voices Lingua Mohamed ElGohary ny Lasopin'ny Abidia. Toa hita fa misy antony tokoa ny maha lehiben'ny fandikan-dahatsoratra azy ato aminay …